Podcast 9x11: Dhammaan wixii ku saabsan nidaamyada NAS | Waxaan ka socdaa mac
Sidii caadada u ahayd, xalay kooxda Soy de Mac iyo kooxda Actualidad iPhone ayaa mar kale kulmay si ay u duubtaan qayb cusub oo ka mid ah barnaamijka Apple Podcast kaas oo aan uga hadalnay wararkii ugu muhiimsanaa 7-dii maalmood ee la soo dhaafay. Munaasabaddan, waxaan kaliya ka faallooneynaa wararka ku saabsan Max, gaar ahaan Qalabka A10 ee ku dhex jiri doona iMac Pro cusub, sidaan kuu sheegnay maalmo ka hor, iyo waliba goorta aan ku raaxeysan karno, ama ku rafaadsan karno MacBook wata processor-ka ARM, waa wax sida ay qabaan qaar ka mid ah falanqeeyayaasha imanaya, inkasta oo maanta qaab dhismeedka processor-ka noocan ahi yahay diyaar uma aha.
Laakiin maqnaanshaha wararka la xiriira iPhone-ka cusub iyo guud ahaan Mac-da darteed, xalay waxaan helnay Josan, oo ka dambeeya webka naseros.com, degel aad ka heli karto wixii macluumaad ah ee la xiriira NAS, ** multimedia NAS ama xarumaha shaqada ** inaan marwalba helno dhamaan macluumaadka aan kushaqeyno maalin kasta meel aamin ah. Sidoo kale, haddii aad qorsheyneysay inaad soo iibsato qalab noocan ah Jimcaha Madow ama Kirismaskan, waxaa lagugula talinayaa inaad dhageysato boodhadhka si aad u xalliso wixii su'aalo ah ee aad qabto.
Haddii aad rabto inaad ku raaxeysato bandhigyada tooska ah ee aan usbuuc walba ka qabanno YouTube iyo iskaashi toos ah, waad iska qori kartaa kanaalkeena YouTube. Laakiin haddii taadu ay tahay inaad ku raaxaysato Podcast-ka adoo sameynaya waxyaabo kale, oo aadan rabin inaad shaashad ku dhegto intaad na dhageysaneyso, ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah inaad iska qorto kanaalka Podcast ee iTunes, halkaas oo saacado yar ka dib markii la galiyo YouTube-ka ay gaarto iTunes. Bisha Diseembar oo dhan waxaan la yeelan doonnaa marti kale oo aan isku dayeyno inaan xallino dhammaan shakiga ku saabsan mowduuc aad in badan wax naga weydiisay beryahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Podcast 9 × 11: Dhammaan wixii ku saabsan nidaamyada NAS